Qhude manikiniki: Mercedes-AMG A 35 4Matic Sedan vs BMW M235i xDrive Gran Coupe
Fanelesibonge Bengu | April 30, 2021
I-MERCEDES-AMG A35 4MATIC Sedan neBMW M235i xDrive Gran Coupe yizimoto eziyizimbangi njengoba zicishe zifane uma uqhathanisa izinto ezifika nazo.
Muva nje, sithole ithuba lokuzishayela kulandelana nokusidweba sicace isithombe sokuthi umthengi uhlalelwe umsebenzi onzima ukukhetha ahamba nayo.
Zombili ziyawadonsa amehlo kodwa ngokwami iMercedes-AMG A35 yiyona enhle kakhulu kusuka ngaphambili kuze kuyoshaya ngemuva ngenxa ye-AMG Aerodynamic Package abayengezile.
Ngaphambili i-radiator grille iphicwe kahle bese iba ne-splitter ezansi, ibe namaLED headlights. Amarimu makhulu amnyama bese ngemuva kuba ne-boot spoiler, i-diffuser emnyama nezinqawe ezimbili.
Ngakolunye uhlangothi, iM235i efakwe iM sport package nayo i-ne grille eyakhiwe kahle enkulu, amalambu eLED, inamarimu angu-19 inch bese kuthi ngemuva izishaye saBMW X4 bese ngezansi iba nezinqawe ezimbili.
Ngaphakathi, iM235i inezihlalo zesikhumba kanti i-A 35 yona ixube isikhumba nendwangu. Kuzona zombili kuyahlaleka ngemuva yize kuyinkinga kuloyo ohlala ngemuva kwami uma ngishayela ngoba ngimude, isihlalo ngiyasihlehlisa bese siba yimbijana isikhala ngemuva.
Ibhuthi inesikhala esicishe silingane njengoba singu-420 litres kwi-A 35 kanti kwiM235i singu-430 litres.
Ingaphambili lazo zombili lakhiwe kahle ngoba alukho uxhaxha lwamabhathini. Okuningi ukulawula kwi-screen se-infotainment system esikhulu. KwiM235i, yilapho uveza khona umsakazo, imininingwane yemoto neselula uma uyixhume nge-Apple CarPlay noma i-Android Auto ngaphandle kwentambo. Uyakwazi ukubona ingemuva uma uhlehla njengoba inekhamera nokunye bese kuba ne-digital instrument cluster. Izinto ozibona kwi-screen uzilawula ngenkinobho engasegiyeni. Engikuthanda ngayo ukuthi imbobo ye-USB yileyo ejwayelekile futhi uyakwazi ukushaja ngaphandle kwentambo.
I-A35 nayo inescreen esikhulu ngaphambili esenza sicishe sifane neseM235i kodwa silawulwa nge-touch pad ekwicentre console njengoba igiya nehandbrake lingasesiteringini kwesokudla. Okumnandi ngayo ukuthi uyakwazi ukuyilawula ngamabhathini asesiteringini. Iphinde ibene-instrument cluster idigital njenge-A 35.
Zombili lezi zimoto zihamba ngenjini kaphethroli engu-2.0 litre 4-cylinder turbo ezinamandla afanayo. Zifuqa amandla angu-225kW kodwa itorque yeM235i inkulu njengoba ingu-450Nm kanti kwi-A35 ingu-400Nm. Zombili zinejubane elikhulu elifanayo elingu-250km/h kodwa i-A35 bathi kuyithatha imizuzwana engu-4.8 ukusuka ku-0 ziye ku-100km/h kanti iM235i yona engu-4.9. IM235i isebenzisa ugearbox oyi 8-speed Steptronic Sport transmission kanti imbangi yona ihamba ngoyi 7-speed dualclutch transmission. Indlela ezidla ngayo uphethroli icishe ifane futhi njengoba ngo-100km kwaMercedes-AMG bathi iphuza amalitha angu-7.3 kanti iM235i yona angu-7.6.
Emgwaqweni uma uhamba ngazo zombili amandla ziwathumela ngokushesha emasondweni futhi noma sekubhrekwa ziyabamba, isiteringi (esimnandi ngoba sinesikhumba kwi-A35) sijika eduze kuzo zombili iya lapho uyikhomba khona. Emajikeni ziyanamathela ngenxa yokuthi zombili zidonsa ngawo womane amasonto. Ugearbox ushintsha ngesikhathi esifanele noma uzishintshela wena kuma pedal shifters emuva kwesiteringi iphendula ngokushesha. Ngeke ungamamatheki uma uzishayela. Lapho iM235i edlisa khona umsindo wenqawe oduma kuzwakale.
Ziyazwela emabhampini ngisho ungazifakile kuSport lapho ususpension othi ukuqina khona futhi i-A35 ngiyizwe ngathi inomsinjwana omkhulu ngaphakathi.
Zombili ziphephile ngenxa yezinto ezinazo ezisiza umshayeli nabagibeli baphephe. Phakathi kwakho ama-airbag ngaphakathi, amasensor emzimbeni, cruise control nokunye okuningi.
Kuncane okuzehlukanisayo uma uziqhathanisa futhi ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza umthengi akhethe ayifunayo ngoba eqhakambisa igama lenkampani, hhayi ngoba enye ingcono kunenye. Zombili zikufaka emndenini wezimoto zejubane zenkampanini zazo ngoba i-A35 yiyona AMG eshibhile kanti uma ungakabi nawo amandla eM enamandla iM235i ikahle.
Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan R850 000
BMW M255i R820 400